Utano HweVanhukadzi (Important Information About Women’s Health - Shona text) - Better Healthcare for Africa
Utano HweVanhukadzi (Important Information About Women’s Health – Shona text)
In 2018, Darrell worked with Dr. Paul Thistle at Karanda Mission Hospital to produce “Important Information About Women’s Health,” an eight-page brochure for women in the community in both Shona and English. Dr. Thistle worked with Akanksha Kulshreshtha, a Zimbabwean medical student at the University of Toronto, to produce the Shona version, presented here.
Bhuku iri haritsanangudze zvose maererano neutano hwevanhukadzi.
Ruzivo pamusoro pe HIV/AIDS ne zvimwe zvirwere zvepabonde rinokwanisa kuwanikwa mune mamwe mabhuku
Bhuku rino rakagadzirwa nerutsigiro kubva kuBetter Healthcare for Africa Inc. na Family Child Healthcare Providers Karanda Mission Hospital
Vanyori: Akanksha Kulshreshtha na Dr. Paul Thistle
Kuronga mhuri isarudzo inoitwa nevaviri kana mumwe arikuchengeta mhuri.
Munhu wese ane kodzero yekusarudza kuti anoda kuita vana vangani
Kusarudza kuregera kuita mwana kunoderedza mukana wekutapudzira utachiona hwe HIV kumwana
Kuita pamuviri kanodarika kashanu pamwechete nekuita nguva pfupi pakati pekuzvitakura kwega kwega, zvinhu zvinogona kukanganisa utano hwemwana naamai
Kuronga mhuzi kunobatsira kusimbisa utano hwemwana naamai
Ndedzipi nzira dzingashandiswe kuronga mhuri
Nzira dzinoshanda kwenguva diki
Nzira dzinoshanda Kwenguva Refu
Mushonga wemuganda – Jadelle & Implanon
Nzira dzinoshanda kweupenyu hwese
*Nzira dzokudzivirira pamuviri kweupenyu hwese dzinokurudzirwa kwazvo kumadzimai ane vana vashanu zvichikwira*
Dzevakadzi- Kusungwa machubu echibereko
Dzevarume- Kusungwa machubu anofamba nembeu
GOMARARA REMUROMO WECHIBEREKO
Gomarara rinoitika pamuromo wechibereko
Rinokonzerwa ne nutachiona unonzi Human Papilloma Virus (HPV), hunowanzotapuriranwa nenzira yepabonde
Kushandisa makondomu nguva dzose pabonde
Kudzvirira kuita shamwari dzakawanda dzepabonde
Kudzvirira kutanga zvepabonde kune vasati vabva zera
Rinoonekwa sei pachirine nguva yekubastirika?
Nekutariswa Muromo wechibereko:
Visual Inspection with Acetic Acid and Cervicography (VIAC) or Pap Test.
Kuonekwa zvichena paVIAC hakurevi kuti mune gomarara remuromo wechibereko nguva dzose. Dzimwe nguva zvinogona kureva kuti mune zvimwewo zvirwere.
Ndiani anofanira kuongororwa?
Munhukadzi wese anoenda pabonde.
Munofanira kuongororwa kangani?
Kamwe chete pamakore matatu kana usina utachiona hweHIV
Kamwe chete pagore kana uine utachiona hweHIV
Zvinokwanisa kuratidza kuti ungava uine gomarara remuromo wechibereko.
Kuburitsa zvinonhuwa kuzasi
Kubuda ropa rakawandisisa pamazuva ako ekutevera kana kutanga kubuda ropa mushure mekunge waguma kutevera.
GOMARARA REZAMU (BREAST CANCER)
Bundu kana mapundu anokura mumazamu
Haasi ese mapundu anobuda mumazamu anoita gomarara, zvikuru sei kumadzimai echidiki nevanoyamwisa
Chii chinowedzera mukana wekuita gomarara rezamu?
Makore ekuberekwa anopfuura makumi mana
Kana mumwe wemumhuri akamboita gomarara rezamu
Kuputa fodya ne kunwa doro
Kudya kune mafuta emhuka/enyama akawanda kana zvekudya zvakatsetseka zvisina matsengwa
Zvii zvinogona kuratidza gomarara rezamu?
Bundu kana kuomarara muzamu kana pedyo ne zamu kwenguva inodarika mwedzi mumwechete
Bundu muhapwa kwenguva inodarika mwedzi mumwechete
Mvura ine ropa kana yakachena inobuda pa zamu
Kushanduka kweganda pakutarisa kana pakubata zamu
Kusiyana kwemazamu kana minyatso yemazamu
Kuzviongorora kwema zamu
Itai izvi pakati pemazuva matatu kusvika mashanu mushure mekunge matevera (kuenda kumwedzi) nekuti panguva iyi mazamu anenge asina kuzvimba uye anenge asingarwadzi
Ongororai nekubata mazamu pamberi pechioneso muchitsvaga zvinhu zvinogona kuratidza gomarara rezamu zvataurwa pamusoro. (kuti muzive zvizere munokwanisa kubvunza vezveutano kuzvipatara zviripedyo nemi)
Kubatwa kwegomarara rezamu pachine nguva zvinobatsira pakurapika kwechirwere ichi.
KUGUMA KUTEVERA/ KUGEZA/KUENDA
Izvi zvinoitika kuvanhukadzi vose kazhinji kune vane makore makumi mashanu zvichikwira
Kuguma kutevera hachisi chirwere
Chiratidzo chekuti munhukadzi aguma kubereka vana
Pane zvakawanda zvinoshanduka mumuviri panguva lyi
Kunyangwe hazvo munhukadzi aguma mbereko hazvireve kuti haachakwanise kusangana nemunhurume pabonde
Unoziva sei kuti wasvika pakuguma kutevera
Kana mazuva ekutevera asisauye nenguva kuvakadzi vanemakore aripakati pemakumi mana nemakumi mashanu.
Ndezvipi zvinoratidza kuti nguva yekuguma mbereko yasvika
Kuwedzera pahuremu hwemuviri
Kunzwa kupiswa zvakanyanya kana kudikitira zvakanyanya pakurara
Kushaikwa kwehunyoro kana kuti kuoma kwenhengo yechikadzi
Kutadza kubatwa nehope
Kunzwa marwadzo mumuviri wese
Kunzwa marwadzo mumabhonzo
(Kana muchinzwa izvi monokwanisa kuenda kunachiremba kunoongororwa kana kuri kuguma kwembereko.)
Mungazvibatsire sei panguva iyi?
Munogona kubatsirika nekudya chikafu chinovaka, kusimbisa muviri kuburikidza nekubata basa kana kumhanya (exercise) uye kusafunganya
Kana muchipiswa uye kudikitira zvakanyanya munogona kunwa mvura yakawanda
Kuderedza kunwa zvinwiwa zvine caffeine zvakaita se coffee, putugadzike (tea) kana coca cola
Matambudziko edundiro akafanana nekuita weti pese pese kusanganisa pakukosora kana kuseka endai munoonekwa nachiremba
Kuramba muchienda pabonde kunogona kubatsira pane zvamunenge muchinzwa
Kunwa mukaka wakawanda kunosimbisa mabhonzo
ZVIRWERE ZVEHUPENYU HWESE
Zvirwere izvi zvinosanganisira chirwere chinokanganisa kufema zvakanaka (asthma), chirwere chemoyo (heart failure), chirwere chemabhonzo (arthritis) pamwe nezvirwere zvichataurwa pasi.
Zvii zvinogona kuwedzera mukana wekuita chirwere ichi?
Kana vamwe vemumhuri vanechirwere cheshuga
Kusabata mabasa zvinogona kukonzera huremu hwemuviri hwakanyanyisa.
Kuputa fodya nekunwa doro
Ndezvipi zvinoratidza kuti munogona kunge muine chirwere ichi?
Kudzikira pahuremu hwemuviri
Kunyanya kunzwa nyota
Kuita weti kakawanda kunyanya pakati peusiku
Kunzwa kunyanya kuneta
Kunzwa nzara padiki padiki
Munokwanisa kuzvibatsira sei mukabatwa nechirwere ichi?
Kuderedza kudya zvikafu zvine shuga ne mafuta
Kuwedzera zvikafu zvakaita se muriwo nemichero
Kuchengetedza utano hwakanaka kuburikidza nekubata mabasa kana kumhanya (exercise)
Mishonga yekunwa kana yekuzvibaya inoderedza shuga muropa yamunogona kupihwa neveutano kuchipatara mushure mekunge mabatwa shuga.
Kuzviongorora huwandu hweshuga muropa pachezvenyu kuburikidza nekushandisa muchini wekumba. Izvi zvinogona kuitwa kuchipatara chiri pedyo nemi kana musingakwanise kuwana muchini uyu.
Chii chinoitika kana chirwere cheshuga chikasarapwa?
Zvirwere zvemoyo, zvirwere zveitsvo, zvirwere zvemaziso, kuoma rutivi, zvirwere zvemutsinga
Munokwanisa kutaura nachiremba wenyu kuti muwane ruzivo rwezvinoratidza kuti shuga yemuropa yenyu yakawandisa kana kuti yakaderera kunyanya vaya vanozvibaya mishonga yekuderedza shuga muropa
CHIRWERE CHEKUKWIRA KWEBP
Munokwanisa kuzvibatsira sei mukabatwa nechirwere ichi
Kuderedza kudya zvikafu zvine mafuta akawanda.
Kudya michero nemiriwo yakawanda
Kuderedza munyu muchikafu.
Mishonga yekunwa inoderedza BP yamunogona kupihwa neveutano kuchipatara mushure mekunge mabatwa nechirwere ichi
Kumira kuputa fodya kana kunwa doro
Kana vamwe vemumhuri vanechirwere chekukwira kweBP
Chii chinogona kuitika kana chirwere chekukwira kweBP chikasarapwa?
Zvirwere zvemoyo, zvirwere zveitsvo, zvirwere zvemaziso, kuoma rutivi (stroke)
MIBVUNZO NEMHINDURO PAMUSORO PEVIAC KUDZIVIRIRA GOMARARA REMUROMO WECHIBEREKO
Chii chinonzi VIAC?
VIAC inzira inoshandiswa kuchipatara kuongorora shanduko pamuromo wechibereko. VIAC inosanganisira kuongorora shanduko pamuromo wechibereko pachishandiswa vinegar. Umbowo hwegomarara remuromo wechibereko unoonekwa nekuchena. Kubvisa zvichena izvi zvinobatsira kudzivirira gomarara rechibereko pamakore anotevera
Zvino revei kana ongororo yeVIAC ine umbowo?
Kana ongororo yeVIAC ine umbowo hwegomarara remuromo wechibereko. Zvinoda kuti murapwe kuburikidza nerubatsiro kubva kune vezveutano. Umbowo hwegomarara hazvirevi kuti matova negomarara. (Kana VIAC isina kuonesa umbowo zvinoreva kuti muromo wechibereko unoratidzika zvakanaka hapana kurapwa kunodiwa).
Kurapwa kuburikidza neVIAC zvingadzivirira gomarara zvachose here?
Kana mudzimai aneumbowo hwegomarara arapwa zvinotarisirwa kuti dambudziko iri rinopera zvachose. Mushure mekurapwa pane mukana mudiki wekuti dambudziko iri ringadzoke zvakare panguva inotevera. Zvinokurudzirwa kuti munoongororwa nevehutano.
Mudzimai anogona kutapukirwa neutachiona hweHIV kubva pazvinhu zvinoshandiswa kuita VIAC?
Kwete. Midziyo inoshandiswa kuita VIAC insukwa nekuchengetedzwa zvakachena nenzira dzemuchipatara, uye midziyo iyi inoshandiswa kamwe chete pamudzimai mumwe.
Ongororo yeVIAC inogona kuona zvirwere zvepabonde here? Ongororo yeVIAC inobatsira kuona shanduko pamuromo wechibereko zvinogona kuzokonzera gomarara, asi ongororo yeVIAC inosanganisira kutarisa nhengo yemudzimai nemuromo wechibereko. Kutariswa uku kunobatsira kuzoonawo mamwe matambudziko akaita semhopo, zvinobuda kuzasi/kusikarudzi nezvimwewo.